ရုရှားက ထုတ် S 400 လေကာစနစ်ဒုံးတွေ ရောင်းချမှု ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့ တရုတ် အမေရိကန်တိုက်စစ်ကို ဘာ နဲ့ကာမလဲ.. – Na Pann San
အေ မ ရိ ကန် တိုက် စစ် ကို တရုတ် တို့ ဘာ နဲ့ကာမလဲ..?
ရုရှား က တရုတ် ကို S 400 ဒုံးတွေမရောင်းတော့ ပါဘူး ထကြေငြာသလို သူ့လေကာ စနစ်က ဒုံးတွေ ဟာ US ရဲ့ F 35 တိုက်လေယာဉ်တွေ ကို မတားဆီးနိုင်ပါဘူး ဆိုတော့ တောင် တရုတ် ပင်လယ်ထဲက ရောက် လာ မယ့် အမေရိကန်လေယာဉ်တွေ လုပ်ချင်ရာ လာလုပ် တရုတ် ထိုင်ကြည့်နေရတော့ မှာပါပဲ.. ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း လွှတ်တော် မှာပြဌာန်းစဉ် မှာ ရုတ်တရက် မီးတွေ ပျက် မိုး ကြိုးတွေ ပစ်သွားတာ ထရန့် အသစ်ဖွဲ့ လိုက် တဲ့ အာကာသ တပ်ဖွဲ့စွမ်းဆောင်မူလား ဆိုတာ သံသယဖြစ် စရာပါ…
ရေမိုင် ကန့်သတ်ခံထား ရတဲ့ တရုတ် တို့ အမေရိကန် တပ် ထိုင်ထားတဲ့ ရှေ့လေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မူ ကလဲ အမေရိကန်ကို ဂရုမစိုက်ဟန်ပြတဲ့ သဘောပေမယ့် တီးကာမှထတီးမယ် အခုတော့ အသာကြည့်နေမယ့် သဘော ပါပဲ…
ဝူဟန်ဓတ် ခွဲခန်းကပြေးလာသူ တရုတ်နိုင်ငံ သူက တရုတ် ရဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ် ဟာ ဇီဝလက်နက်အသွင် ဆိုတာကို ဖွင့်ချလိုက်တာ တရုတ်အ တွက် မလှုပ်မယှက် သာ အခြေအနေဖြစ်လာ ပါတယ်…
ပိုစိတ် ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက တရုတ်ရေ တပ် စခန်းရှိ ပါတယ် ဆိုပြီး အိန္ဒိယက အခိုင်အမာ ဆိုထားတဲ့ ကိုကိုးကျွန်း ကို အမေစု သွားတာ ပါပဲ.. သာမန် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံအနေ နဲ့ ဖွံဖြိုးရေးအတွက်သွားတာဖြစ်နိုင်ပေ မယ့် အမေရိကန် တရုတ် စစ်ရေး တင်းမာချိန် မှာ သွားတာဟာ အမှန်တကယ်ရှိ မရှိ သွားကြည့်တာလား သံသယနဲ့ ပစ်လွှတ်လိုက်မယ့် ဒုံးတွေ ကို ကာကွယ်ဖို့ လားဆိုတာ…
တိုင်းပြည်တစ်ခု ရဲ့ ပါဝါဟာ လက်နက်ပေါ်တ ည် ဆောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး လက်နက်က သူ့ထက်သာ သူပေါ်လာ ရင် ပါဝါလျှော့ တာပါပဲ ခေါင်းဆောင် ရဲ့ပါဝါကသာလျှင် ဘယ်လိုအန္တရယ် ကို မဆိုတားဆီးနိုင်မှာပါ…
မြန်မာ ကို သူ့ရှေ့တန်းခံစစ် အဖြစ်အသုံးချပြီး သူနိုင်ငံ မထိအောင် လုပ်မယ့် တရုတ် တို့ အကြံအစည် ကို အဘတွေလဲ မလွန်ဆန်နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်ကတော့ သေနတ် တစ်လက်မရှိ လက်ဗလာ နဲ့ နိုင်ငံစစ် သလင်း မဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်နေ ပါတယ်.. ကြား က မနေတတ် မထိုင်တတ် တရုတ်ကြက်ဥတိုက်နေ တဲ့ အဘတွေကတော့ ဘယ်သူသေသေ တရုတ် က ငါ့ငွေတွေ မကုန်ပြီးရောလုပ်နေတဲ့ အဘ ဇတ်သိမ်းတော့မ လှနိုင် ပါဘူး…
စစ်ပွဲစ ဖို့ တင်းမာမှု တစထက် တ စမြင့်တက်မှုတွေ နဲ့အတူ အဘတွေ ဇတ်သိမ်းပြီး မြန်မာပြည် ကံကောင်းမူတွေ စလာမလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြ မယ်ဗျာ…
အေ မ ရိ ကနျ တိုကျ စဈ ကို တရုတျ တို့ ဘာ နဲ့ကာမလဲ..?
ရုရှား က တရုတျ ကို S 400 ဒုံးတှမေရောငျးတော့ ပါဘူး ထကွငွောသလို သူ့လကော စနဈက ဒုံးတှေ ဟာ US ရဲ့ F 35 တိုကျလယောဉျတှေ ကို မတားဆီးနိုငျပါဘူး ဆိုတော့ တောငျ တရုတျ ပငျလယျထဲက ရောကျ လာ မယျ့ အမရေိကနျလယောဉျတှေ လုပျခငျြရာ လာလုပျ တရုတျ ထိုငျကွညျ့နရေတော့ မှာပါပဲ.. ဟောငျကောငျအုပျခြုပျရေး ဥပဒမေူကွမျး လှတျတျော မှာပွဌာနျးစဉျ မှာ ရုတျတရကျ မီးတှေ ပကျြ မိုး ကွိုးတှေ ပဈသှားတာ ထရနျ့ အသဈဖှဲ့ လိုကျ တဲ့ အာကာသ တပျဖှဲ့စှမျးဆောငျမူလား ဆိုတာ သံသယဖွဈ စရာပါ…
ရမေိုငျ ကနျ့သတျခံထား ရတဲ့ တရုတျ တို့ အမရေိကနျ တပျ ထိုငျထားတဲ့ ရှလေ့ကွေောငျးစဈရေးလကေ့ငျြ့မူ ကလဲ အမရေိကနျကို ဂရုမစိုကျဟနျပွတဲ့ သဘောပမေယျ့ တီးကာမှထတီးမယျ အခုတော့ အသာကွညျ့နမေယျ့ သဘော ပါပဲ…
ဝူဟနျဓတျ ခှဲခနျးကပွေးလာသူ တရုတျနိုငျငံ သူက တရုတျ ရဲ့ ဝူဟနျဗိုငျးရပျ ဟာ ဇီဝလကျနကျအသှငျ ဆိုတာကို ဖှငျ့ခလြိုကျတာ တရုတျအ တှကျ မလှုပျမယှကျ သာ အခွအေနဖွေဈလာ ပါတယျ…
ပိုစိတျ ဝငျစားစရာ ကောငျးတာက တရုတျရေ တပျ စခနျးရှိ ပါတယျ ဆိုပွီး အိန်ဒိယက အခိုငျအမာ ဆိုထားတဲ့ ကိုကိုးကြှနျး ကို အမစေု သှားတာ ပါပဲ.. သာမနျ ဆိုရငျတော့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံအနေ နဲ့ ဖှံဖွိုးရေးအတှကျသှားတာဖွဈနိုငျပေ မယျ့ အမရေိကနျ တရုတျ စဈရေး တငျးမာခြိနျ မှာ သှားတာဟာ အမှနျတကယျရှိ မရှိ သှားကွညျ့တာလား သံသယနဲ့ ပဈလှတျလိုကျမယျ့ ဒုံးတှေ ကို ကာကှယျဖို့ လားဆိုတာ…
တိုငျးပွညျတဈခု ရဲ့ ပါဝါဟာ လကျနကျပျေါတ ညျ ဆောကျတာ မဟုတျပါဘူး လကျနကျက သူ့ထကျသာ သူပျေါလာ ရငျ ပါဝါလြှော့ တာပါပဲ ခေါငျးဆောငျ ရဲ့ပါဝါကသာလြှငျ ဘယျလိုအန်တရယျ ကို မဆိုတားဆီးနိုငျမှာပါ…
မွနျမာ ကို သူ့ရှတေ့နျးခံစဈ အဖွဈအသုံးခပြွီး သူနိုငျငံ မထိအောငျ လုပျမယျ့ တရုတျ တို့ အကွံအစညျ ကို အဘတှလေဲ မလှနျဆနျနိုငျပမေယျ့ နိုငျငံခေါငျး ဆောငျကတော့ သနေတျ တဈလကျမရှိ လကျဗလာ နဲ့ နိုငျငံစဈ သလငျး မဖွဈဖို့ ကာကှယျနေ ပါတယျ.. ကွား က မနတေတျ မထိုငျတတျ တရုတျကွကျဥတိုကျနေ တဲ့ အဘတှကေတော့ ဘယျသူသသေေ တရုတျ က ငါ့ငှတှေေ မကုနျပွီးရောလုပျနတေဲ့ အဘ ဇတျသိမျးတော့မ လှနိုငျ ပါဘူး…
စဈပှဲစ ဖို့ တငျးမာမှု တစထကျ တ စမွငျ့တကျမှုတှေ နဲ့အတူ အဘတှေ ဇတျသိမျးပွီး မွနျမာပွညျ ကံကောငျးမူတှေ စလာမလား ဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ကွ မယျဗြာ…
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ ရဲ့ တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ကို ကုလသမဂ္ဂ တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်း အရာရှိ အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်